Basikety – “CCCOI”: tsara fanombohana ny CosPN | NewsMada
Tontosa, omaly tany Seychelles, ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja basikety. Tsara ny vokatra ho an’ny ekipa solontena malagasy, nanoloana ny ekipan’ny beau Vallon, mpampiantrano ity fifaninanana ity.
Nahomby ny lalao voalohany nikaran’ny CosPN an-kianja ary nomontsaniny tamin’ny isa 89 no ho 79 ny ekipan’i Seychelles. Nitarika ny isa hatrany am-boalohany ny ekipa malagasy nandritra ity fifanandrinana nafana vay ity ary tsy nitsaha-nitombo ny isa teny amin’ny solaitrabe. “Tsara ny fanomanana”, hoy ny mpilalao avy amin’ny CosPN, ka rariny ny fandresena, na nanano sarotra ihany aza ny fihaonana tamin’ity ekipa mpampiantrano ity.
Mbola hitohy anio ny ady ho an’ny CosPN, ao anatin’ny andro faharoan’ny fifaninanana. Ekipa maorisianina, ny Mahebourg Flippers, ny miandry ny ekipa malagasy amin’ity anio ity. Ady goavana ihany koa ary ho mafy ho an’ny CosPN ny lalao eo aminy sy ny ekipan’ny Premium Cobras, anisan’ny kalaza avy any Seychelles. Lalao hatao, rahampitso zoma, andro fahatelo amin’ny fifaninanana. Nilaza ny ho tsy matahotra anefa ireo mpilalao malagasy ary vonona hiatrika izay ekipa rehetra mifanandrina, raha ny fanazavana. Ezahin’izy ireo hatrany ny ho lohany amin’ireo ekipa enina mandray anjara amin’izao fifaninanana izao. Marihina fa tsy nahatonga solontena ny Nosy La Réunion sy i Mayotte.